Nyochaa: techlọ ọrụ itinye ego na Agtech na Nigeria
Ebe E Si Nweta: Efarms.com
A marala teknụzụ iji rụọ ọrụ na ọrụ ngwa ngwa ma dịkwa mfe karịa ya itinye ya n'ọrụ na mpaghara niile.
Site na ngalaba mmụta na ngalaba na-ahụ maka ego, teknụzụ achọpụtala okwu dị mfe, na ọrụ ubi ahapụghị.
A na-akpọ ngwa nke teknụzụ na ọrụ ugbo AgTech ma ọ bụ AgricTech nke na-anọchi anya Teknụzụ Ugbo na ọ gụnyere ntinye teknụzụ niile na ntinye ọhụụ n'ime usoro ọrụ ugbo iji mee ka arụmọrụ, mkpụrụ, yana uru bara uru.
Enweela nnukwu mmụba na mmụba nke mmalite na-enye ọrụ AgTech na afọ ise gara aga, nke ọ bụla na-ewepụta ihe ọhụụ dị iche iche nke ga-agbanwe ihe ọkụkụ ka ọ bụrụ ihe na-egbu pesti ma ọ bụ iji nweta ọganihu ngwa ngwa na ọtụtụ ndị ọzọ.
AgTech ulo oru mbo ulo oru toro n'akụkụ mmalite na AgTech àjà ohere irite si ugbo ọbụna mgbe mmadụ na-adịghị ifịk ifịk a ọrụ ugbo.
Igwe okwu AgTech ndị a na-akwụ ROI nye ndị na-etinye ego mgbe etolitere ma rere ha.
Enwere ezigbo ụlọ ọrụ AgTech itinye ego na Naijiria, enweghị usoro ụfọdụ ụfọdụ n'ime ha gụnyere:
Nke a bụ ụlọ ọrụ AgTech ego nke ụlọ ọrụ Leadway Asssurance, nke tọrọ ntọala na 2016.
A na-ahụta ya dịka ọsụ ụzọ nke itinye ego AgTech na Naijiria. Farmcrowdy na-ezube inyere aka na United Nations Sustainable Development Goals na Ọrụ Ugbo na ngalaba mmetụta
Farmcrowdy na-enye ngalaba ugbo sitere na puku naịra iri ise na puku na narị puku atọ ma na-akwụ ROI nke 6% na 27% dịka ọnụọgụ nke ọnwa etinyere ego ahụ.
Dị nnọọ ka aha ahụ pụtara, Farm4Me na-enye ndị na-etinye ego ohere ikpebi ihe ha chọrọ ka akụ ha. Nhọrọ a gbasaa n'ofe ego kụrụ na a na-arụ ọrụ ugbo na nkwekọrịta.
Ndị ọrụ ugbo 4 ahụ na-akọ ihe ubi, na-ewe ihe ubi, ma na-ere ngwaahịa ndị a, na-ebupụtakwa mmasị ahụ dịka nkwekọrịta nkwekọrịta si dị.
ROI maka itinye ego ndị a dị oke elu, Farm4Me kwere nkwa ruo 73% nloghachi nke ọmụrụ nwa na nkwụghachi ma ọ bụrụ na ahịa ahụ daa ma ọ bụ ọnụ ahịa ahịa dị ala.
Farm4Me nwere ugbo di iche iche na steeti di iche iche na Nigeria, ugbo ha di na Kaduna, Jigawa, Oyo, Ekiti, Delta, Osun, Ogun, Katsina, Ondo, Benue, Kano, na Niger.
Eme nke ọma Agric
Agric Thrive bụ ụlọ ọrụ ọrụ ugbo na-arụ ọrụ na nkà na ụzụ nke na-enye ndị ọrụ ugbo ikike ego nke ndị na-etinye ego ma na-ahụkwa na usoro ahụ bara uru maka ndị ọzọ.
Mee nke ọma na-eme nke ọma na-arụ ọrụ ugbo abụọ, osikapa na ọkụkọ. A na-ahapụ ndị na-etinye ego ka ha họrọ itinye ego ha na nke ọ bụla.
Thrive Agric na-ezube iwulite netwọkụ nke ndị ọrụ ubi Africa nke nwere ike ịzụrụ ọ bụghị naanị onwe ha kama ụwa niile.
Companylọ ọrụ a nwere ugbo dị na Kura, Warawa, Iseyin, Ibadan, na Ajingi ma nwee ihe karịrị otu narị puku ndị ọrụ ugbo na netwọkụ ya. Companylọ ọrụ Leadway Assurance na-amakwa Thrive Agric.
Ugbo a na-enweta ego site na ozi ahụ iji nweta nkwado na nchekwa nri na mba ahụ, Africa, na ụwa n'ozuzu site na ịnye ikpo okwu ebe ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ òtù dị iche iche nwere ike itinye ego ma nweta nloghachi bara uru, a na-eji ego a etinye ego iji tinye ego maka ndị ọrụ ugbo ndị na-emepụta maka ebumnuche azụmahịa
Ugbo ala nyere ego na-enye 20% ROI maka itinye ego maka usoro ugbo nke na-adịgide ọnwa 8 na 80% ROI maka ọrụ ugbo ha na-arụ maka ọnwa 24.
Obere ego a ga-enye maka ịkọ ugbo bụ puku naịrà iri abụọ ma ego ntinye ego maka ọrụ ugbo a gbara ume bụ otu narị puku naịra.
Aglọ ọrụ AgTech a nwere ugbo na Kwara, Lagos, na Oyo steeti ma lekwasị anya na mmepụta anụ ụlọ na mkpụrụ ego.
Nke a na - enye ndị ọchụnta ego ohere ị ga - ahọrọ ịhọrọ maka ntinye ego ha.
PayFarmer na - eje ozi dị ka akwa mmiri n’etiti ndị ọrụ ugbo na ndị na - etinye ego ma na - achọpụta na onye ọ bụla ga - enweta mmeri, onye na - etinye ego na - eji ego karịa ma onye ọrụ ugbo nwere teknụzụ nke ga - eme ka ọrụ ugbo na ọrụ ya dị mfe ma ka na - amịpụta mkpụrụ kacha mma
Chibuzor Elizabeth Chijioke nke gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Abia State bụ onye Naijiria na-azụ ahịa na onye edemede ọdịnaya. Ọ zụrụ azụ dị ka onye na-ere ahịa dijitalụ na Innovation Growth Hub. Ọ na-agba mbọ ịkụziri ndị mmadụ otu esi etinye teknụzụ iji mee ka ndụ na azụmaahịa ha ka mma. Ọ na-eji oge ezumike ya agụ akwụkwọ sci-fi na fantasy novels.